လူသတ်မှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » လူသတ်မှု
Posted by ဘဲဥ on Jun 28, 2012 in My Dear Diary | 36 comments
ဟုတ်ပါတယ် လူသတ်မှုပါ၊ ကန်တော်ကြီးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။
ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကို အရင်ရည်းစားဟောင်းက ဓါးနဲ့ထိုးပီးရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့ပီးတော့ အလောင်းဖျောက်တဲ့ ပြစ်မှု့ပါ။
ကောင်မလေးက အရင်ဘဲဟောင်းကိုဖြတ်ပီးတော့ ဘဲဘဲအသစ်လေးနဲ့ ချိန်းတွေ့နေတဲ့ အချိန်မှာ အရင်ရည်းစားဟောင်းက ရောက်လာပီးတော့ ဓါးနဲ့ထိုးပီးရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့တာ။ ကောင်မလေးရဲ့ သွေးတွေကလည်း အများကြီးစွန်းပေကုန်တယ်။ဘဲအသစ်စက်စက်ကလေးကလည်း အားကိုးရတယ် ပြေးတာမှ တန်းနေတာပဲ။ ရည်းစားဟောင်းက စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်လည်းပီးရော လူသတ်မှုနဲ့ အဖမ်းခံရမှာ ကြောက်လာတယ် ဒါနဲ့ အလောင်းဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားတော့တာပေါ့ ၊ မြေကျင်းတူးပီးတော့ ကောင်မလေးကို မြုပ်ပစ်ခဲ့တယ်။ တော်တော် လူမဆန်တာနော်။ ရည်းစားဟောင်းက အိမ်ပြန်ရင် အဖမ်းခံရမှာကြောက်လို့ အိမ်ကိုမပြန်ရဲဘဲ သူ့ သူငယ်ချင်းဆီမှာသွားအိပ်တယ်။ ညလည်းရောက်ရော အသတ်ခံရတဲ့ကောင်မလေးက အိမ်မက်ပေးတော့တာပဲ ၊ သူ့ကို လုံးဝခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အကြောင်း ရောက်ရာဘဝက လက်စားချေမယ်ဆိုပီးတော့ လည်ပင်းညှစ်တော့တာပဲတဲ့ ။ တစ်ရက်ထဲမဟုတ်ပဲ သုံးလေးရက်လောက်ဆက်တိုက်မက်တာ အဲ့ဒီမှာ ရည်းစားဟောင်းကောင်လေးလည်း (လူသတ်တရားခံ) အရမ်းကြောက်လန့်သွားတယ် ၊ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပီးတော့ သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်တယ် ။ လူသတ်တရားခံရဲ့ သူငယ်ချင်းက အဖမ်းခံလိုက်ဖို့ပြောတယ်။ တရားခံကလည်း အဖမ်းခံမယ့်အကြောင်းပြောတယ် ပြီးတော့ ညတိုင်းအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်နေတာကို သူအရမ်းတုန်လှုပ်နေတဲ့အကြောင်း ၊ အိမ်မက်ဆိုးတွေ မမက်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာကို အကြံဥာဏ်တောင်းတယ်။ တရားခံရဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်း သူ့အသိထဲမှာ ပရလောကနဲ့ပက်သက်ပီးတော့ အစွမ်းထက်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ အဲ့ဒီဆရာဆီကိုရောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။
အဲ့ဒီဆရာကလည်း အိမ်မက်ဆိုးတွေမမက်အောင် သူလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း ၊ ကောင်မလေးကို မြေမြုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကို လိုက်ပြပေးဖို့ပြောတယ်။ ကောင်မလေးကို သတ်တုံးက သွေးစွန်းနေတဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုလည်း ယူခဲ့ဖို့ပြောတယ်။ လူသတ်တရားခံကလည်း အဝတ်အစားတွေယူပီးတော့ ကောင်မလေးကို မြေမြုပ်ခဲ့တဲ့ ကန်တော်ကြီးကနေရာကို လိုက်ပြတော့တာပေါ့။ အဲ့ဒီနေရာလည်းရောက်ရော ဆရာက အလောင်းပြန်ဖော်ပီးတော့ ကောင်မလေးအတွက် အမျှအတမ်းပေးဝေနေတယ်။ ပြီးတော့ လူသတ်တရားခံကိုပြောတယ် သွေးစွန်းနေတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ပြောင်စင်အောင်လျှော်ဖို့ပြောတယ်။ လူသတ်တရားခံက သူ့ အဝတ်အစားတွေပေါ်မှာစွန်းပေနေတဲ့ သွေးကွက်တွေကို ဘယ်လိုမှပြောင်စင်အောင်လျှော်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီဆိုတာလည်းသိလိုက်တယ်…
ဘယ်ပြောင်မှာလဲ ရှင်က ဖူဂျီနဲ့မှ မလျှော်တာ တဲ့
အဟီးးး ဆပ်ပြာကြေငြာတာနော် စိတ်အချိုးရဘူး တိရား
အစကတော့ အဟုတ်မှတ်လို့ လိုက်ဖတ်နေတာ
သဂျီးကတော့ ဒေါသသင့်တဲ့ ကြော်ငြာလို့ ပြောဒါဘဲ..
GTC က လူသတ်မှုအကြောင်း .. သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲ ..
လာပြန်ပြီ..နှစ်၁၀၀၀ကျိန်စာဆိုပြီး.. ပုပ္ပားနဲ့..ကိုင်တုတ်မလို့ဟာ.. ဖူဂျီဖြစ်သွားလို့ပေါ့ကွယ်..
ဘာပဲဖြစ်ြ့ဖစ်.. မီးတောင်သေချင်းတော့… တူပါတယ်..
ဟုတ်တေးဘူး တဂျီးမင်းရဲ့ မွှားနေဘီ
ပုပ္ပား ကမီးတောင်သေမဟုတ်ဘူးဗျ . တေချာလေ့လာလိုက်ဘာအုံး (ဟိဟိ ဂွင်ကြုံတုံးလေး တွယ်လိုက်ပီ နာကွ ဘဲဥ )
ပုပ္ပါးက ဘာတောင်ကြီးလဲဟင် …ဒါဆို
ပုပ္ပါးတောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ၊ မြင်းခြံ ခရိုင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် တွင်တည်ရှိသည်။ ယင်းတောင်တန်းသည် ပဲခူးရိုးမ၏ မြောက်ဘက်အစွန်းတွင် သီးခြား ထိုးထွက်နေသော မီးတောင်ဟောင်းကြီး တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
မီးတောင်သေ (ခေါ်) မီးငြိမ်းတောင် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ၊ မီးတောင်အရှင်ဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်လည် ပေါက်ကွဲနိုင်ပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၇)နှစ်ကျော်လောက်က ချော်ရည်ပူတွေ စိမ့်ထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ဒေသခံ တော်တော် များများသိလိုက်ကြပါတယ်။
ဖတ်ပြီးသား ပိုစ့်တစ်ခုနဲ့ တော်တော်ကြီး တူတယ်နော်။
အသည်းတုန် ပန်းတုန် (အဲလိုပြောကြတာပဲ ဘာပန်းလဲတော့မသိ အာဟိ) ဘာပြောသလဲလို့
ဘဲဥပုတ်မ ညည်းကိုတင်ထားရတာ ငါ့အခိုင်တောင်ဆွေးတယ် လာပီး ဖူဂျီကြော်ငြာဝင်သေးတယ် ……
ဥဥ ကိုယုံလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ ဆပ်ပြာကြော်ငြာဖြစ်နေတယ်။ အဲ့လိုမျိုးဇာတ်လမ်းကြားဖူးတယ်။ GTC ကျောင်းသားတွေလေ။ ဒါနဲ့ တူတူပဲ။
ဟား ဟား .. ဘဲဥမတို့ … ဥာဏ်များပြီ …
လိမ်စဉ်ကြီး ဖတ်ကတည်းကသိတယ် … ဘယ်နှယ့် ကန်တော်ကြီးလိုနေရာမျိုးမှာ လူသတ်ပြီး မြှုပ်နေတာတောင် … ဘေးလူမသိဘူးဆိုတော့ .. အတော် အရိပ်ကောင်း ၊ ချောင်ကျလို့ပဲ ဖြစ်မယ် အဟီး … ဒါနဲ့ မြှေမြှုပ်ဖို့ .. လက်နဲ့ တူးလိုက်တာလား …. ။ အဟိဟိ
ဖတ်ဖူးပြီးသား ဟာသကြီး … ။ ဟွန် …
အာပျိုဂျီးတို့ ကန်တော်ကြီးမှာ ဘာသွားလုပ်ကြတာဒုံး
ဘာသွားလုပ်တာလဲဆိုတော့………….အဲ……………………………………………. မြေကြီးသွားတူးတာ………ကဲ … ရှင်းပလား…..
အောင်မလေး ဘဲဥရယ်.. ကန်တော်တောင် မကြီးနိုင်တာ အတော့်ကိုကြာပြီတော့ … ။
ကန်တော်ကြီးလို နေရာမျိုးလာတဲ့အတွဲတွေက အလန်းလေးတွေချည်းပဲ .. ကိုယ်တွေလို အသတ်တွေ ဘတ်နေတဲ့အရွယ်သွားလျှင် …. မကြီးမငယ်လို့ အပြောခံရဦးမယ် …. ။ အဲ့ဘက်ကို ခြေဦးကို မလှည့်ဘူး ..အဟီး
တောင်မလေးနေရာတွင် ပွင့်က လည်းကောင်း …
ဘဲဘဲ အသစ်နေရာမှာ ဗြဲသီးက လည်းကောင်း …
ဘဲဘဲအဟောင်းနေရာမှာ ဘဲဥက လည်းကောင်း ….
သရုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း …. ။
ပရလောကဆရာနေရာမှာ Mr.တောက်တဲ့မှ ပါဝင်အားဖြည့်ပေးထားပါကြောင်း
ဖူဂျီမသုံးနဲ့ တော့ နောက်ဆို…အဲဒီသရဲမကဒိတ်အောက်သွားပြီ…
အို အဂျစ်ကလေးရယ် အိုအဂျစ်ကလေးရယ်
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းသိသလိုလိုပါပဲအောက်မေ့နေတာ။ ကပေါက်ဖေါ်ပြောမှပဲ ဟုတ်သား ကလား လို့။ လေးပေါက်လိုပြန်မန့်လိုက်မယ်။ အမေရှိရင် ဘာတဲ့ အီလန်ရှိတယ်တဲ့။ မွေးမေကျေးဇူးဆိုလား။ ဟီဟိ ကော်မန့်ကိုပါကော်ပီကူးလိုက်ပါကြောင်း။
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းသိပါတယ်လို့အောက်မေ့နေတာ။ ကပေါက်ဖေါ်ပြောမှပဲ ရှင်းတော့တယ်။
လူကြီးလိမ် အဲ.. လူလိမ်ကြီး … အကောင်းမှတ်လို့
ဘဲဥတော့…. ဥ ကွဲတော့မယ်……ဟင်း…..ဟင်း…….
လာနောက်နေတယ်ဗျာ၊ တကယ့်အဟုတ် ဖြစ်ရပ်မှတ်လို.၊ ဘာလဲဗျာ၊ မညစ်နဲ.နော်
ဘဲဥမ ရေနွေးစိမ် ကာကျက်လုပ်လိုက်လို့ ဥကန်းသွားမယ် ဘာမှတ်လဲ သွားကြိုက်တာဝယ်စား ရော့ ၂ ကျပ် ပေး ၁၀ ပြန်အမ်း
အဟီ မပြောင်ရင် ပင်မင်းအက်လိုက်လေ ၁၀၀ ဘဲပေးရတယ်
အဲ့ဒါ အောက်ခံဘောင်းဘီ ဟုတ်ဘူး၊ ရက်စတုန်းဂျီးဒဲ့
အမလေးဗျ. ဖူဂျီကြေညာနေတာကိုး။ကြေညာခလေး တောင်းအုံးနော်။
ဝင်ရောက်အားပေးကြတဲ့ ရွာသူားများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
ရှဲ့ရှဲ့၊ သန့်ခယူ၊ ကျေးကျူးကမ္ဘာဆိုင်၊
ဘဲဥ ပုတ်မဂျီး …